N'ụwa ọrụ na-agbanwe agbanwe, ọtụtụ ndị na-achọ ịkwụsị ọrụ ha, malite azụmahịa, ma ọ bụ gbanwee ọrụ iji rụọ ọrụ na-eme ka uche dịkwuo mma, maka onwe ha na, n'ezie, maka ụwa. Mana ọgbaghara seismic na-emekwa n'ọkwa akụ na ụba. Echiche nke ụwa agbanweela nke ukwuu kemgbe ọtụtụ n'ime anyị banyere ọrụ.
Karịsịa ebe ọ bụ na igwe nwere ike ime ọtụtụ ihe taa karịa ka anyị chere. Ha nwere ike dochie ọrụ mmadụ nke ha na-enweghị ike dochie anya mbụ. Igwe ndị ahụ nwere ike ịrụ ọrụ ndekọ ego, ịwa ahụ, oku ekwentị na-akpaghị aka maka ndoputa ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na ọrụ ntuziaka ndị ọzọ na-emegharị ugboro ugboro. Igwe na-amawanye ihe, mana uru ikike mmadụ nwere karịa igwe ka dị oke egwu. Dị ka igwe na-anọchi ọrụ ndị a, ụmụ mmadụ ga-emegharị na ịzụlite nkà iji chekwa ọdịnihu nke ọrụ ha.
Kwadebe maka ọdịnihu Ọnwa Iri na Abụọ 21, 2021Tranquillus
GỤỌ Olee otu na-adịgide adịgide n'isi gị okwu?
gara agaGbanwee agụmakwụkwọ na ọzụzụ: ozi ngwakọ!
-esonụBụrụ onye nweere onwe ya, nzọụkwụ 1: echiche na ọnọdụ uche!